Wal walka iyo kalsooni darada ka qabta garsoorka dalka.Cartan Maxamed Jamac | Togdheer News Network
Wal walka iyo kalsooni darada ka qabta garsoorka dalka.Cartan Maxamed Jamac
Somaalidu Waxay Ku maahmaahda Falaadhi Gilgilasho kaagama GO’odo, Go’aan ka Gudoomiyaha Maxakamada Sare ugu digay garsooreyaasha ka soo dhex muuqday ololaha xisbiyada siiba xisbi xaakim ka Kulmiye ma qancin doontaa bulshada wal walka iyo kalsooni darada ka qabta garsoorka dalka.
Haddii aan anigu laftaydu jawaabteeda ku horumaro waxaan qabaa in jaawaabtu tahay MAYA, waayo sinaba uma banaana markaad eegto xeerarka garsoorka, dastuurka qaranka iyo waliba xeerarka caalamiga ah u dajisan judiciary system ka habka garsoorka in bahda garsoorku ka dhexda muuqdaan waaba olole ah axsaabta siyaasada.
Haddaba arintani waxay markhaati u ahayd in aan wakhti xaadirkan kirin garsoor lagu kalsoonaan karo oo marjac u noqon kara haddiiba alla kama dhiga wax muran u eeg soo dhex galo hanaanka doorashada.
Umaynay baahnayn digniin arintani ee waxay ahayd in gudoomiyaha maxamkamada sare ka qaado garsooreyaashani disciplinary action, waayo waxay ku kaceen khiyaano qaran maadama iyagoo garsoore yaal ah si cad ugu ololeeyeen xisbi ka mid ah axsaabta qaranka.
Marka xaalku wuxuu eeg yahay ALLOW SAHAL AMUURAHA.
CARTAN MAXAMED JAAMAC
Somaliland oo ka digtay dhuxusha loo iib geeyo Puntland
Erdogan: “Codadkii Laga Hayey dilka Khashoggi wuxuu cabsi galiyay sirdoonka Sacuudiga,”
Hay’adda barakacayaasha oo kulan u qabatay qoxoontiga yemen
Agaasimaha baanka dhaxe ee Somaliland ayaa ka warbixiyey Safar uu ugu Maqnaa Jabuuti.
Dayaca iyo Burburka ka muuqda Goobti Madax-banaanida S/land Lagaga dhawaaqay
Callum Wilson: Alan Shearer has been 'very supportive'
Mathieu Flamini: 'Footballers should support causes'
Be a buddy not a bully, says England keeper Pickford